တီတီချမ်း အင်တာဗျူး – Everybody Read TChen
Category: တီတီချမ်း အင်တာဗျူး
ခုတလော ဘာရေးရမလဲပြတ်နေတာပါ တနေ့တနေ့ အိုင်ဒီယာ ကမထွက်ဘူးလေ ဒါပေမယ့် ခုတလောမှ ကိုယ့်ဘလောခ် ကိုလာလာလည်နေတဲ့ မမကြီးဆိုတဲ့ တယောက်နဲ့ စကား ပြော ဖြစ်ပါတယ် နောက်တော့ သူကလင့်ခ်ပေးလို့ ဘလောခ် တချို့ရောက်သွားတော့ ရေးချင်လာတာလေးတွေရှိလာပါတယ် အရင်တခါကလဲရေးဖူးပါတယ် ကြိုက်တဲ့လူတွေက အားပေးကြပြီး မကြိုက်တဲ့လူတွေ က ရှုံ့ချကြတဲ့ ပိုစ့်မျိုးပါ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ တီချမ်းက လူပြောမခံရရင် ထမင်း စားမဝင်ဘူးလေနော့ ဒေါ်ရီတာကတော့ ကြိုက်ပုံရပါတယ် တောင်းဆိုထားတာကြာပါပြီ အဲ့တော့ရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ခုတော့ အရင်ပိုစ့်က ဒီမှာပါ တီချမ်းအင်တာဗျူး ဆိုပြီးရေးခဲ့တာပါ ခုတော့ အင်တာဗျူးနောက်ဆက်တွဲ သို့အပိုင်းနှစ်လို့ပြောရရင်ရမယ်ထင်တယ်နော်………
တနေ့သောအခါမှာ ဘလောခ်စပေါ့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွင်ထိုင်နေတုံး ဂျာနယ်လစ် မောင်မျိုးအား အယ်ဒီတာက ဟစ်ဖြစ်မယ့် စာမူမရှိဘူးလို့ခေါ်ဆူတဲ့ အတွက် တခါက ဗျူးထားတာ တော်တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘလောခ်လောက ပွဲဆူဘုရင်မ ဝတ်လစ်တလစ်ဗျူတီ (ပြောရဲတယ်နော်) တီတီချမ်း ကို ဗျူးဖို့သတိရမိပါတယ်။ မှတ်မိပါသေးတယ် အဲ့ဒီ တီချမ်း အင်တာဗျူးစာမူပါလာတဲ့ လတုံးက မဂ္ဂဇင်းစောင်ရေ ထိုးတက်သွားတာ မြန်မာပြည်က ကားဓါတ်ဆီဈေးတက်သလိုပါပဲ ၅ဆပါ ၅ဆ နော် ၅ဆ
အဲ့တော့လဲ မဂ္ဂဇင်းတိုက်က မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ဆိုက်ကားလေးနဲ့ တီချမ်းရဲ့ ဘယ်ဗလီဟေးလ် မှာ ရှိတဲ့ အဆင့်လွန် ခေတ်ဆန် ဆင့်ဆင့်ဆန်း တိုက်ခံခြံ ကိုရောက်သွားပါတယ် အိမ်နေရင်း မပြင် မဆင်ဘဲ ကပိုကယိုလှနေတဲ့ တီတီချမ်းက ဗိုက်ကြီးသည် ဂါဝန်နဲ့ပါ အောက်ကလဲ လင်ဆေးလိုဟန်၊ ဘရစ်(တ)နီ လှံတို့ ပဲရစ်ဟီလ်တန်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ရောက်ရောက်ချင်း တီချမ်း ရဲ့ မန်နေဂျာ အကြံပေး စက်ကတ်ကြေး အိမ်တော်စောင့် ဒေါ်ရီတာ နဲ့တွေ့ရပါတယ် တီချမ်းကို အင်တာဗျူးချင်လို့ဆိုတော့ အပွိုင့်မန့် ယူထားလား လို့မျက်နှာထားနဲ့မေးပါတယ် မယူထားပါဘူးဆိုတော့ အဲ့တာဆိုရင် ၂၀၁၂ မှပြန်လာခဲ့လို့ ပြောပါတယ် အမ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ တီချမ်း ရဲ့ ဒိတ်တွေအကုန်ပြည့်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်
ကိုယ်ကလဲ ဘလောခ်စပေါ့အောင်မျိုးမှလား ဒီလိုအရေးတွေကြိုမြင်ပြီးသားပါ ဘလောခ် တကာလှည့် အရပ်တကာလှည့် ထီးဖြူပြီး ဖိနပ်ပါးလာတဲ့ကောင်ပဲ အသင့်ပြင်ပါလာတဲ့ လော်ရီရယ် ဆက်လိုက် ကိုထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်ရီတာ ခမျာ လော်စပီကာလောက်နီးနီး
“ဟယ်…………………….”ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ ရီဝေနေတဲ့ မျက်လုံးကိုပေကလပ်ပေကလပ် လုပ်ပြီး ရယ် လာပါတော့တော့ လော်ရီရယ် ဆိုတာ ဒါပါကလားလို့ အသိတိုး ရပြန်ပါတယ်
အဲ့တာနဲ့ပဲ တိုက်တဲ့ အအေးကိုသောက်ပြီးသကာလ တီချမ်းနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါတယ် အော် ကျေးဇူးကြီးမားလေခြင်းနော်……………………..
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= တီချမ်းခုတလော ဘာတွေလုပ်နေလဲကနေစရအောင်နော်?
တီချမ်း= အော်ကိုမျိုးရယ် ထွေထွေထူးထူးတော့လဲမဟုတ်ပါဘူး ခုတလော တီ နောက်ဆုံး ရေးတဲ့ “အညတရ” ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ရှိတယ်လေ အဲ့တာ ထုတ်ဝေသူတွေ လိုက်နေလို့ တီက တီ့ကိုယ်ပိုင် “ချမ်း” စာအုပ်တိုက်ကပဲ တကမ္ဘာလုံး တဦးတည်း မူပိုင်ထုတ် ပါမယ် ဆိုတာမနည်းပြောယူရတယ် မကောင်းဘူးလေနော် (ဟင်းဟင်ဟင်း ဟု ညှင်းသွဲ့သွဲ့လေးသာယာစွာရယ်သည်) တီ့အမျိုးသားကတော့ ပြောပါတယ် နည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ် မျှပေး လိုက်ပါလားတဲ့ တီကပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ ပူလစ်ဇာ ဆုရတော့မယ့် ကမ္ဘာကျော်မယ့် ဂန္တဝင်တွင်မယ့် ပိုတန်ရှယ် ကဗျာ မျိုးကို ဒီလို လွယ်လွယ် ပေးလို့ရမလားပေါ့ သူကဘာမှ နားမလည်ဘူးလေနော် တီ့အမျိုးသားဆိုတာ ကလဲ ခုခေတ် ယောက်ျားအများစု လိုပဲ အိမ်ရှင်း ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ် မီးပူတိုက် ကလေးထိန်းလောက် ပဲတတ်တာဆိုတော့လေ ပြီးတော့ တွဲဘက်ရေးဖော် မိဘုတ်ရန်ကလဲရှိသေးတယ်လေနော့ တော်ကြာ ဆုရတော့မှ သူလဲတူတူ ရေးတာပါဆိုပြီး လာလုနေတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော် အဲ့တော့ တီကခုရှုပ်မှနောင်ရှင်း ပေတန် (patent) လုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= နောက်ပြီး ခုတလော တီ့ဘလောခ်မှာ တနေ့ လူ ၃၀၀ ကျော်ဝင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား။ တီချမ်းလို စလစ်ဗရစ်တီ တယောက်က ပွဲဆူအောင် ဘယ်လိုများ လုပ်လိုက်တာလဲ ဆိုတာလေးလဲသိချင်ပါတယ်?
တီချမ်း= ပွဲဆူအောင်………………..? အိုကိုမျိုးရယ် မဟုတ်တာ တီက စလစ်ဗရစ်တီ မဟုတ်သေးပါဘူး အဟင်းဟင်း ဖြစ်ချင်ဖြစ် ဝတ်လစ်စလစ်ဗျူတီကမှနီးစပ်ပါသေးတယ် ( ဟု မျက်ခုံးလေးအားလှပစွာပင့်၍ လုံးဝ မသိနားမလည်သော အပြစ်ကင်းလေသံလေးဖြင့်) ဘယ်လိုများပွဲဆူအောင် တီလုပ်မိလို့လဲ ကိုမျိုးရယ် မဟုတ်တာ ညှင်းညှင်းညှင်း…အိုကိုမျိုးရယ် ကြံကြီးစည်ရာ တနေ့ လူ “၃၀၀ ကျော်” ဝင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် “တီလုပ်တယ်” ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်လို ပြော ရမလဲ တီ့မှာ တီ့ကို obsessed ဖြစ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတယောက်ရှိတယ် သူကလုပ်ပေး တာပါ။ တိုက်ရိုက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူက တီ့ဘလောခ်ကိုနေ့တိုင်းလာတယ် လာသမျှလူတွေနဲ့ ဒိုင်ခံရန်ဖြစ်ပေးတယ်။ ပြည်သူ့မေတ္တာခံယူတယ်။ မလာပါနဲ့လားဆိုတော့လဲသူမနေနိုင်ပြန်ဘူး။ ဟော ခုဆိုရောဂါကဘယ်လောက်ထိရင့်လာသလဲဆိုရင် ဘလောခ်ဖွင့်ပြီး တီ့အကြောင်း ရေး တယ်။ အဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေရှာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုလိုလူဝင်များတာ သူ့ကြောင့်လို့တော့ ပြောလို့ရမယ် သွယ်ဝိုက်ပြီး တော့ပေါ့။ တီကျေးဇူးတင် ထိုက်သူပေါ့ နော်။
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= ပွဲဆူအောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုလက်ရှိ ဘလောခ်လောက ကိုဘယ်လိုမြင်ကပါသလဲ?
တီချမ်း= အင်းအဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောချင်နေတာ။ မေးမှမေးပါ့မလားလို့…..
ခုတလော ဘလောခ်လောက မှာ လူတွေလူတွေ ဘိုင်ပိုလာ ဖြစ်တာပိုများလာသလိုပဲ (ဘလောခ်စပေါ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ မောင်မျိုး ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့နားထောင်နေသည်။ တော်သေးတယ် ဘိုင်ပိုလာဆိုတာ ဘာလဲမမေးလို့ဟု တီချမ်းမှ အင်တာဗျူးဖြေနေရင်းတွေးသည်။ ကိုယ်က ကြားဖူးနားဝနဲ့ဆော်လိုက်တာ စကားတလုံး ဘာပဲပြောပြောလူအထင်ကြီးတာပေါ့) ဘယ်လိုလဲ ဆိုတော့ ခါတိုင်းအချစ်အကြောင်းဘာအကြောင်းရေးနေတဲ့လူကလဲ ဘလိုင်းကြီး ထပြီး နိုင်ငံရေးအကြောင်းရေးလိုရေး။ ပွဲဆူအောင် လုပ်တာပေါ့လေ။ ဟော ခုတလော ဘလောခ် လောကမှာ ခွေးရူးတွေလဲ တော်တော် ပေါလာတယ် စည်ပင်က အမဲတုံးမပစ်တော့ တွေ့ကရာလူတွေကိုလိုက်ကိုက်တာပေါ့။ အဲ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဘလောခ်တွေကိုလဲသွားပြီး အယုတ်တ အနတ္တတွေကိုနှမချင်းမစာနာ ရေးတဲ့ ယောက်ျားဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေ (အဲ့လူ တွေက ယောက်ျားဘလောခ်ဂါတွေဆီကျတော့ သွားမရေးရဲဘူးလို့ ဆိုတဲ့သူတွေကဆိုတယ် သူတို့ကို… xxx … လုပ်လိုက်မှာကြောက်လို့တဲ့လေ) တရားပဲကျရသေးတော့နော်၊ နောက်တခါ သူတို့ကို သူတို့ ဘလောခ်ဂါဝေဖန်ရေးဆိုတဲ့ တကျွန်းပြန်လိုလို အမှောင်ကမ္ဘာ ဘက်တော် သားလိုလို လူတန်းစားတရပ်လဲပေါ်ထွန်းလာသေးသတဲ့။ ဟောတချို့များဆိုရင် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ဘာညာရေးရတာ အားမရလို့ ဘလောခ်တောင်ဖွင့်ပြီး ပါဆင်နယ်လီး အတက်ခ် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာအထိတောင်လုပ်ကြသေး) မိန်းမမို့မိန်းမလိုမိန်မရ လုပ်ရင်ထားပါတော့ တချို့ယောက်ျားရင့်မာကြီးတွေကလဲ ဒါမျိုး လုပ်တတ်တယ်နော်၊ ဟင်းဟင်း နောက်ဆို တီတို့အတွက်တောင် ထမိန်တွေ စကပ်တွေရှားလာဖွယ်မြင်တယ်။ ဟောခုတခါ ကျတော့ နောက်ဆုံးပေါ်ပဲ တီတွေ့တာ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဖဲ့တယ် ဘာညာ ဆိုပြီးတော့ လူတကာ မကောင်းကြောင်းတွေအလှည့်ကျရေးကြတယ်။ နောက်တမျိုးတဘာသာကလဲ ရှိသမျှလူတွေကို သနားအောင် ပတ်ချွဲနပ်ချွဲတွေပြော။ ရှိသမျှလူတကာ ချစ်ချစ် ချစ်တဲ့ ကိုကို မောင်မောင် ကိုကို မောင်မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ် စသဖြင့် ချစ်ချစ်ချင်း မွှန်အောင်ခေါ် အဲ့လို ထွေထူးအံ့ရာသော် ဆိုတဲ့ လူတွေလဲရှိကြသေးတယ်လေ။ မြန်မာ့ဂီတ လောကနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ပြရရင် ရဲလေးလိုပေါ့လေ (စကားချပ်)။ နောက်ဆုံးတော့လဲ လူတွေကိုပဲ လိုက်ကိုက်ကိုက်၊ သူငယ်ချင်းကိုပဲဖဲ့ဖဲ့၊ နိုင်ငံရေး ရေးပြီးတော့ပဲ ပွဲဆူအောင်လုပ်လုပ်၊ ငြင်းငြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဘလောခ်ဖွင့်ပြီးတော့ပဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေဆော်ဆော် ပတ်ချွဲနပ်ချွဲလုပ်ပြီးရေးရေး၊ အားလုံးက ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ လုပ်ပြီး နောက်ဆုံးမတော့ နာမည်ကြီးချင်တာပါပဲ
အဲ့တော့ တီလေ့လာကြည့်တယ် သုံးသပ်ကြည့်တယ် စဉ်းစားကြည့်တယ် ဝေဖန်ပိုင်းခြား ကြည့်တယ် ဘာလို့များ အဲ့လို ဇာတ်လမ်းတွေ ရှည်နေရတာလဲပေါ့နော် နာမည်ကြီးချင်တာများ တီ့လို ကိုယ်တုံးလုံးပုံတွေဘာတွေတင်လိုက်ပြီးရောနော့ တခါတည်း နေ့ချင်းညချင်း နာမည် ကြီးသွားမယ် ပရိုဖိုင်းတွေဘာတွေသေချာမဖတ်ဘဲနဲ့တောင် နှာဗူးမကြီးဘာညာ ဘွဲ့ တွေ ဘာတွေရသွားနိုင်တယ် အဲ့လူမုန်းတော့ နဲနဲခံရမှာပေါနော် အမှန်တော့ မုန်း တယ်ဆိုတာကိုက ဆိုက်ကိုလောဂျီသဘောအရ ချစ်တာတမျိုးပဲမဟုတ်လား အဲ့လိုပေါ့နော့ တီတွေးမိတာလေးတွေပါ
နောက်တခု ဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ တီတို့လူတွေ ခုတလောပြောပြောနေကြတဲ့ ဘာတဲ့ ဒီမိုကရေစီပေါ့လေ (တီနားလည်တာကတော့ ဟိုမိုကရေစီ ပဲ ဒီမို မဟုတ်ဘူး ဟိုမို အဲ့တာကမှအမှန် ဟိဟိ ကြော်ညာ ကြော်ညာ) အဲ့တာကို ပါးစပ်မှာ အာဂုံဆောင်ပြီးတော့ လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြတာပဲ။ အဓိက ကတော့ မြန်မာပြည် အပြင်ဘက် ကိုရောက်နေကြ တယ်ကွယ်၊ မီးမှန်မှန်လာတယ်ကွယ်၊ အင်တာနက်လွယ်လွယ်သုံးရတယ်ကွယ် ဘာလုပ်လုပ်အဖမ်းမခံရဘူး အမေကြီးကား လိုနေရာရောက်နေရင် အဖမ်းခံ ရနိုင်ခြေရှိတာနဲ့တင် အဆိုင်လမ် တွေဘာညာ အော်ပြီးတော့ အစိမ်းရောင်ကဒ် ရနိုင်ကြတာကိုး။ ကဲဒီလိုလူမျိုးတွေမှ လုပ်ချင်တာမလုပ်ကြရင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလုပ်မလဲနော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၁၀ အကြို ဟိုမိုကရေစီ ကိုစတင်ကျင့်သုံးလာကြတာကောင်းပါတယ် မဲပေးနည်းလေးတွေတချို့ဘလောခ်တွေမှာထည့်ထားတာတွေ့ရတယ် ကြိုက်မကြိုက် ဘာညာပေါ့ အဲ့စနစ်လေးတွေကိုလဲ ၂၀၁၀ အတွက် ပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကကျင်းပဆိုသလို တကယ့်ကိုအပြင်မှာ ရှိနေတုံး လွတ်လပ်တုံးလေး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တင်ကြိုကျင့်သုံး လာကြရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွယ်
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= အင်းအဲ့လိုတရှည်တဝေးရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာ အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ကော တခုခုပြောပါအုံး?
တီချမ်း= အင်းအနှစ်ချုပ်အနေနဲ့က တီစဉ်းစားကြည့်တယ် စာရေးတယ်ပေါ့နော် တချို့ ကလဲ ဝါသနာပါလို့ရေးတယ်၊ တချို့ကလဲ စာရေးဆရာတကယ်ဖြစ်ချင်လို့ ကလောင်စမ်းတဲ့ အနေနဲ့ ရေးတယ်။ တချို့ကလဲ ဘလောခ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တည်း ဖြတ်မဂ္ဂဇင်းလို ချက်ချင်း ပရိတ်သတ်ရဲ့ ဝေဖန်ရေးကိုရတယ် ဘာညာပေါ့
တချို့ ဘလောခ်ဂါလေးတွေရှိပါတယ် တော်တော် အနေတတ်တယ် ဘယ်သူတွေဘာဖြစ်နေနေ သူတို့ဘာသာ သူတို့ စာပဲပုံမှန်ရေးတယ် ကြားနေပေါ့။ တချို့ကျတော့လဲ ဘက်လိုက်ပြီး ရန်ဖြစ်ပေးကြတယ် အဂတိပေါ့ တချို့ကကျတော့ အသေကိုဖဲ့တာ တကယ့်ကို့ပဲ အာဂါတပေါ့ အမျိုးစုံပါပဲတွေ့ရပါတယ်။ တချို့ကျတော့လဲ ငြင်းခုန်ရတာ ဝါသနာပါတယ်လို့ကိုပြောပြီး ချဲပါတယ် တီကလဲတရား သဘော တွေကိုနားလည်လွန်းလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး လူတွေရဲ့သဘော လူတွေရဲ့မနော ကို စောကျော်ကြည့်တာပါ။ တီလဲမလွတ်ပါဘူး ဒီထဲက တမျိုးမျိုနဲ့တော့ ညိတာပါပဲ။ အဲ့တော့ တီကမနေတတ်တဲ့လူတွေထဲမှာပါတာပေါ့။ အဲ့တာကြောင့်လဲ ဒီအင်တာဗျူးကိုလက်ခံတာပါ။ ပြောချင်နေတာလေးတွေရှိသေးတယ် ဘာလို့ ကိုယ်တိုင်ကကောင်းမနေဘဲနဲ့ သူများလိုက်ပြောနေတာလဲလို့မေးရင်လဲ တီ့အလုပ်ကအဲ့တာပဲလေ ကိုယ်ကတော့အနေအထိုင်မတတ်ဘူး လျှပ်ပေါ်လော်လီ နေမယ် သူများတွေကိုတော့ စကပ်တိုတယ် ဘာညာ လိုက်ပြောမယ် အဲ့တာကို လူပီသတယ်လို့မြင်တယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်ကြုံတော့ ပြောပါအုံးမယ်။
Posted on December 9, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်း အင်တာဗျူး9 Comments on အချဉ်ပေါက်ခြင်း
အန်တီချမ်း=အင်းအဲတာကပေါ့နော် ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုတော့ ပေါ့နော်………………..
နည်းနည်းတော့ ရှည်မယ် ပေါ့နော် ပြောရရင်ပေါ့နော် အစက ဒီလိုလေ…………. တီကလေ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာရေးတာ ၀ါသနာပါပါတယ်ပေါ့လေနော်
နောက်အမ ကလဲ နာမည်ကျော် ဘလောခ်ရေးဆရာမကြီးဆိုတော့ (ဒီနေရာ မှာ ဒီလောက ကလဲ ဟိုလောက လိုပါပဲ ပေါ့နော် အမ တင်ပေးရင် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးရင် ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် အကို ကနာမည်ကြီးရင် လဲ ညီတွေ ညီမတွေ ကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် လိုက်ပေါက်ကြပါတယ်ပေါ့ အရှိန်ပေါ့နော်………. အဲတာလိုတယ်ပေါ့နော်)
နည်းလမ်း အမှတ် (၄)နောက်တော့ ကလေးမွေးရပါတယ် အင်း………နားရှုပ်သွားသလားမသိဘူး ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် တီ့ထက် အနည်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် များများပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငယ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ သားလေး သမီးလေး မောင်လေး ညီမလေး ဖမ်းခေါ် အဲပြီးတော့ ဟောခုန က နည်းလမ်းမဟာ ဥာဏ်ဗျူဟာ လို့တောင် ခေါ်ရင်ရမယ့် အိမ်လည်လိုက်၊ ပြန်အလည်ခေါ်၊ မလာလည်ရင် စိတ်ဆိုး၊ အဲတာတွေ စိတ်ဆိုးတာတွေ တခါ လူသိအောင်အိမ်တခါပြန်လိုက်အော် စတဲ့ နည်းလမ်း အသွယ်သွယ် အဖြာဖြာ တွေ ကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ အဲတာ နဲ့ ဒီလို ဒီလို နေ့ချင်းညချင်း ဟော်လေးတကျိုးကျိုး ဟိုးလေးတကျော်ကျော်နာမည်ကြီးလာတာပါပဲပေါ့နော်။
နည်းလမ်း အမှတ် (၅)အဲတာ က ဘာလဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ဘလောခ် မှာ ရန်တွေ ဘာတွေ နည်းနည်းဖြစ်ရပါတယ် နောက် တော့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေ ဘာညာတွေပေါ့နော် အဲလိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်……………..
အင်းအဲလောက်ပါပဲပေါ့နော် ဆက်ပြောရင် တီလဲ အသတ်ခံရကိန်းမြင်နေပါတယ်ပေါ့နော်……..း)
အန်တီချမ်း= ဟုတ်ကဲ့ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ က စတယ် ဆိုတော့ တီက သေသေချာချာ ရေတွက်မယ် ဆိုရင် ၃ လ ထဲမှာပေါ့နော်။ ပြည့်တော့ မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်။ အဟင်း အဟင်း အဟင်း ညှင်းညှင်း………..အဟွင်း
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= ဟုတ်ကဲ့ ဒီ ၃ လ ထဲမှာ ရေးခဲ့သလောက်ထဲ က တီချမ်း အကြိုက်ဆုံးလေး…?
အန်တီချမ်း= အင်းဘယ်လိုပြောရမလဲ ဆိုတော့ ပေါ့နော် အား……………………..လုံးက တီ ကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ တီ့ ရင်သွေးလေးတွေပဲ ဆိုတော့ ပေါ့နော် အားလုံးကို အတူတူပဲ ချစ်ပါတယ်ပေါ့နော် (မမို့လေသံနဲ့ပြောသည်) အဲတာကြောင့်ဆိုးတဲ့ ကောင်လေး ကိုလဲ ဆိုးလို့ ချစ်သလို လိမ္မာ တဲ့ကောင် ကျပြန်တော့ လဲ ချစ်ရပြန်ပါတယ်ပေါ့နော် အလယ်အလတ်ကောင်လေးတွေ ကျတော့ လဲ လပ်ကျန်မခဲ့အောင် ချစ်ရပါတယ် အဲတော့ အင်းဖြေရမယ် ဆိုရင်ပေါ့နော် သားသမီးတွေ အားလုံးကို တူတူ တန်းမျှ ချစ်ပါတယ် ပဲ ဖြေရင် မှန်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့လေနော် …………..ဟင်းဟင်း………………ထမင်းထမင်း…………..
အန်တီချမ်း=အင်းပေါ့နော်…………….ဘယ်လိုပြောရမလဲ ပေါ့နော် ………..တီ တို့ က ၀ါသနာ ရှင်တွေ အဆင့်ပါပေါ့နော် ပညာရှင်တွေ အဆင့် မဟုတ်သေးပါဘူးပေါ့နော်၊ နောက် တီ က လူကလဲငယ် လူသစ်တန်းကလဲဖြစ် ဆိုတော့ မမှန်းရဲပါဘူးပေါ့နော် ခုမှ ပညာရည်နို့စို့ တုန်းပါပေါ့နော် လေ့လာသင်ယူနေတုံးပဲပေါ့နော်………….တီနဲ့ တူတူ ဘလောခ် ရေးနေကြတဲ့ စလုံးက သူသူ(ဒေလီယာ) တို့ အရီးတောင်း ရဲ့မြေးမ အရီးတား တို့၊ ဘောနပ်စ်လေးတွေ နဲ့ ရေးတတ်လို့ ကာကာ(ဘော) လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုကိုကာကာ၊ ပန်းချီးကားအကြောင်းလေးတွေ ရေးတတ်တဲ့ (ကား)နန်းညီ တို့၊ လူငယ် ထဲက တော်တော် ပေါက်တဲ့ ပီအမ် (ညပိုင်း) တို့ ကလဲတော်တော်ကောင်းတော့ မမျှော်လင့်ရဲပါဘူးပေါ့နော် နောက် တီ နဲ့ က တင်တဲ့ ဒါရိုက်တာ မတူပေမယ့် အသည်းကွဲပိုစ့်တွေ အရေးများတာချင်းတူတဲ့ ကြယ်ဖြူစင် ဆိုတာ ကလဲ ရှိနေသေးတော့ အင်းဘယ်လိုပြောရမလဲ ပေါ့နော်……………မျက်လုံး အား ၇ ချက်မျှ ကလယ်ကလယ် လုပ်၍
ပရိသတ်က ပေးတယ် ဆို ရင်တော့ ရချင်ပါတယ်ပေါ့ အဲ့လိုပဲ ကိုယ့် ညီ အကို မောင်နှမတွေ ထဲ က ဘယ်သူပဲ တကယ်အရည်အချင်းရှိလို့ ရရ။ ဘယ်လူကြီးတွေ ကို ဘယ်လောက် ဘယ်နှပုံး၊ ဘယ်နှခွက်၊ ဘယ်နှပုလင်း စသဖြင့်ပေါ့နော် ပိုက်ဆံပေးလို့ ရရ ပေါ့နော် တီ ကတော့ ၀မ်းသာပေးမှာပါပဲ ပေါ့နော် မုဒိတာ လဲပွားပါတယ်ပေါ့နော် ………….(အဲ အဲ့ဒါလေး ထည့်မရေးလို့ ရမလားဟင်……………….
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= ကဲကဲ အဲတာ ဆို အင်တာဗျူး ရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တဲ့ အန်တီချမ်း နဲ့ တနေ့တာ လေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်နော် ကျတော် တို့ မဂ္ဂဇင်းတိုက် ရဲ့ အတော်ဆုံး ဓါတ်ပုံဆရာ အက်ဒီချန်း(ခေတ္တ ဖင်ကောက် အဲလေ ဘန်ကောက်) ကနေ ပြီးတော့ တီချမ်း နဲ့တူတူဒီနေ့ တနေ့ လုံး တီချမ်း သွားသမျှနေရာ တွေ လိုက်ကပ်စား အဲလေ…..လိုက်ပြီးတော့ တီချမ်း ပုံလေးတွေ ကို လှလှ လေး ရိုက်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်။
အန်တီချမ်း= ဟုတ်ကဲ ပါပေါ့နော် တီကလဲ ခုလိုလာရောက်မေးမြန်းတဲ့ အတွက် (လာမေးပေးဖို့ အာပေါက်အောင်ခေါ်ရတာ မုန့်ကျွေးရတာ စာမူခပေးရတာတွေ ခေတ္တမေ့ထားပြီးသကာလ) ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ပေါ့နော် ဟိုလေ…………ဟို ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေ မရိုက်ခင်လေ တီ့ ကိုပိန်အောင် ရိုက်ပေးလို့ ရမရ အဲတာလေး ဖိုတို ဂရဖ်ဖာကောင်လေးချောချောလေး ကို တချက်မေးပေးပါလားဟင်..?
အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )= အော် …..အဲဒီအတွက် တော့ မပူပါနဲ့ တီချမ်းရဲ့ ကျတော် တို့ (ဘလောခ်စပေါ့ ) မဂ္ဂဇင်းက စာရွက်အကောင်းစား၊ ကျော်ညာ (ကျော်ကျားအောင် ညာတဲ့အတွက်) များများ နဲ့ ထုတ်တဲ့ ကွာလတီ မဂ္ဂဇင်း ဖြစ်လေတော့ အင်္ဂလိပ် လို့ တတ်ခ်ျ touched လို့ ခေါ်တဲ့ ပြုပြင်ပြီး သားပုံတွေ နဲ့ ပဲ သုံးပါတယ် အဲ့အတွက် အန်တီချမ်း ပုံတွေ ကို ရိုက်တုံးမှာ အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာ ကိုလဲ တတ်ခ်ျ touched လုပ်တဲ့ အခါကျရင် မိတ်ကပ် ကို မသိမသာလေး မှုန်မှုန်လေးဖို့ထားသလို ထင်ရအောင်ပြုပြင်ပေးလို့ ရပါတယ်။ နောက်ခု တီ့ မျက်နှာ ပေါ်က လကမ္ဘာ ခွက်တွေ အဲလေ ၀က်ခြံ၊ဆင်ခြံ စတဲ့ မသိသားဆိုးရွားနေတဲ့ ဖုလေးတွေ ကိုလဲ ဖြောက်လို့ ရပါတယ်။ ဟော်…………..တီ “၀”နေရင်လဲ ကွန်ပျူတာအဖက်တွေ နဲ့ မယ်စကြာဝဠာ အလား အထင်မှတ်မှားရအောင် ပြင်ဆင်ချက်လေးတွေ အနည်းငယ် မဆိုစလောက်လေးတွေ ကို ဖိုတိုရှော့ပ် photoshop ထဲမှာ အကုန်ပြင်လို့ ရပါတယ် အန်တီချမ်း ရယ် စိတ်မပူပါနဲ့နော်။
အန်တီချမ်း= အော် အင်း အဲတာ ဆိုရင် တော့ ကျေးဇူးပါပဲကွယ် ငှင်းငှင်းငှင်း……………….နောက်လဲ မကြာမကြာ လာဗျူးနော် ဒီက ခဏခဏဖြေချင်နေတယ် ခိခိခိ…………………………..
မနက်နိုးနိုးချင်း အချိန် ကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁၁ နာရီပါ တီ က အဲလိုပဲ ညကိုနောက်ကျမှ အိပ် ပြီး မနက် ကို ထချင်တဲ့ အချိန်မှ ထပါတယ် ဒီနေ့ က စနေ ဆိုတော့ အိုကေတယ်လေ……….ဒီနေ့တော့ နိုးနိုးချင်း ချစ်တူမ မိရောင်နဲ့ စကားပြောပါတယ် နောက် ထုံးစံအတိုင်း ပိုစ့်သစ်တင် တတောင်တောင်နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ လူတွေ နဲ့ ချက် အင်းဒီနေ့ ဆို ဂရုချက်တောင်ချက်လိုက်ကြသေးတယ်……နာမည်ကျော် ဘလောခ် အကျော်အမော် တွေ ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော်လေဒီ ဂါဂါ ရဲ့ အကိုတော် ဘလောခ် ဂါ ကိုကိုကာကာ။ သရဲကားတွေ ရိုက်ရင် မိတ်ကပ် ကူစရာမလိုလို့ ဒါရိုက်တာတွေ တော်တော် သဘောကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်သစ်လေး မိုးခါး၊ (သူကခုလောလောဆယ်တော့ မိုးခါးနဲ့ ဒေါ်ဒေါ်နွေး ဆိုတဲ့ ခေတ်လွန်သရဲကားတကားရိုက်နေပါတယ်တဲ့ ကျောင်းကအပြန်လမ်းမှာ ကားအက်ဆီဒင့် တခု နဲ့ ကြုံရတဲ့ ကျောင်းသူမလေးနဲ့ ကားတိုက်ခံရပြီး ပွဲချင်းပြီး အစိမ်းသေ သရဲဖြစ် အမေနွေး (ခေါ်)ဒေါ်နွေးတို့ ရဲ့ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူး အသည်းနာ ၀မ်းနည်း သနား လွမ်းဆွေး သံဝေဂယူစရာ ဇာတ်ကားကောင်းလေး တပုဒ်ပါတဲ့။ (ဒါက မိုးခါးအတွက်ကျော်ညာ သူလဲ ကျော်အောင်ညာညာနေတာပဲ) နောက် သီချင်းတွေ ကို အပြားကြီးတွေ ပွတ်ပွတ်ပြီးဖွင့်တဲ့ ဒီဂျေ ကြယ်ဖြူစင် တို့နဲ့ပေါ့ ဂရုချက်ချက်ကြပါတယ်။ နောက်တော့ ၃ နာရီလောက်လဲ စကားပြောပြီးရော လက်တွေတော်တော်ညောင်းလာကြတာနဲ့ စကားစသတ်ပြီး မနက်စာခေါက်ဆွဲ ကို နေ့လည် ၂ နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ သွားတီးဖို့ပြင်ပါတယ်။
ဒီပုံက ဓါတ်ရထား မှတ်တိုင် မှာ ကော်ဖီကျော်ညာတာပါ တီသဘောကျလို့ရိုက်လာတယ်။အနောက်က ကော်ဖီ စစ် မှာ အငွေ့လေးတွေ ထွက်ပြီး ကော်ဖီနံ့ သင်းသင်းလေးရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ မိုက်တယ် သိလား……
ဒီအောက်ကပုံတွေ ကတော့ ဂျေဂျေ ဈေးနားက ပန်းခြံပါ ဦးမွန်လေးခွ တလက်နဲ့ သွားသွားသောင်းကျန်းနေတာပေါ့…း)
ကဲကြည့်ကြပါအုံး ဘန်ကောက်မြို့ကြီးကို မလန်းစိမ်းဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ကုန်ကုန်ကို တော်တော် သတိရသွားတယ် နာဂစ်မလာခင်ကဆို ကုန်ကုန်က တော်တော် လှတာပါ……
ဒါလေးကတော့ ကလေးကစားကွင်းပါ။ ကလေးကစားကွင်း နဲ့ ကလေးတွေ အဖေအမေ တွေ ကိုမြင်တော့ ကိုယ့် ရဲ့ ကလေးလိုချင်တဲ့ ရောဂါဟောင်း ကလေးရူးခြင်းက ပြန်ထလာပါတယ်………….
ကိုယ်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကလေးရူးခဲ့တာပါ ကလေး တယောက်လောက် အမြဲလိုချင်ခဲ့တယ်။ ကြီးလာရင် ကလေးလေး တယောက်ယောက်လောက်တော့ မွေးစားမယ်ပေါ့ (ကိုယ်ကလဲမွေးစားကလေးဆိုတော့ ကိုယ့်ကလေးကိုလဲ အဲလိုပြုစုပျိုးထောင်ချင်ပါတယ် ပြီးတော့ ကိုယ်က ကလေးတယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ရတာကိုလဲ အနုပညာ တခု လို့မြင်တယ် ကိုယ်သင်ယူချင်တဲ့ သင်ယူခွင့်ရချင်တဲ့ အနုပညာ တမျိုးထဲမှာ သူလဲပါတယ်။ ထားပါလေ လမ်းလွဲကုန်မယ်…………..း) နောက်ကြုံတော့ သပ်သပ်ရေးတာပေါ့နော်
ဒါကတော့ တီ့ အကြိုက် “ဆွဲ” လက်ဖက်ရည်ပါ အပူအအေး နှစ်မျိုးရပါတယ် တီကတော့ အအေးပဲ သောက်ဖြစ်တာများတယ် နောက် လက်ဖက်ရည် ဆွဲနေတဲ့ကောင်လေး က ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွက် သမိုင်းပေးတာဝန်အရ ၀ယ်သောက်ရပါတယ် ဟိဟိ …..း)…………အတူလာ နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် နဲ့တယောက်တခွက်
ဒါကတော့ လျောက်လည်ရင်း လျောက်ကြည့်ရင်း ညနေ ၆ နာရီ ထိုးတဲ့အတွက် ယပလက်တွေရဲ့ နိုင်ငံတော်သီချင်း ကိုနီးစပ်ရာစတေရှင်တွေကနေ လွှင့်ပါတယ် လူတွေ အကုန်ရောက်ရာနေရာ မှာ…………..“ရပ်”………”stand still” ပါ။ အားလုံးကလဲ လေးစားလိုက်နာကြပါတယ် နိုင်ငံခြားသားတွေကအစပေါ့ ရွှေတွေနဲ့များ ကွာချက်နော်…………….ရုပ်ရှင်ရုံထဲက ဇာတ်လမ်းမပြခင် မတ်တပ်ထရပ် ရတဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းနဲ့ အလံကို သတိရမိပါသေးတော့တယ်။
ဒါကတော့ တီ ၀ယ်လာတဲ့ ပန်းလေးတွေ ပါ ရေချိုးခန်းထဲ က ဘတ်တပ် ကြီးနားမှာထားပါမယ်။ရေမွှေးနံ့နဲ့ ဆပ်ပြာမြုပ်တွေထနေတဲ့ ရေနွေးကန်ထဲမှာ ရေစိမ်ချိုးရင်း ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲက မင်းသမီးတွေ လို ခြေထောက်လေးနဲ့ အပင်လေးတွေကို တို့ထိကစားပါမယ် နောက်ကနေ မောင် ကိုကြီး ညီ ကလေးလေး ကောင်လေး စိန် တယောက်ယောက် က ဖက်ထားပေးပေါ့ ………………အဟိ………………ခုပုံကလဲ အဲဒီ ဘတ်တပ် ထဲထည့်ရိုက်ထားတာပါ ခိခိ
၀က်နဲ့ ကြက်၊ ဂဏန်း ပြည်ကြီးငါး ၀က်ချိုပြား နဲ့ ၀က်ဆီပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက်က အမဲ မစားတဲ့အတွက် တီ ငတ်ပါတယ်။း) …..၀က်ဆီ က အိုးမကပ်အောင် အဲလိုအပေါ်ထိပ်တည့်တည့် မှာတင်ထားလိုက်ပါတယ် သူ့ဆီကနေ စီးကျလာတဲ့ အဆီ များကြောင့် အိုးအကပ် သက်သာပါတယ်၊ လန်းတယ်နော် အိုင်ဒီယာက………………း)
စားသောက်ပြီးတော့ ဗိုက်ကို အနိုင်နိုင် သယ် ပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရပါတယ်။ နောက် အိမ်ရောက်တော့ သရဲကား ကြည့်ပါတယ် မိုးခါးလေးတောင် သတိရမိသေးတော့…………း)
Posted on April 25, 2009 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, တီတီချမ်း အင်တာဗျူး22 Comments on တီချမ်းရဲ့ တနေ့တာ (အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )-ဗျူးသည်)